miaraka amin'ny vato roa
Solar Solve dia afaka manome rafitra jiro roa ho an'ny varavarankely tokana. Azo atao amin'ny alalan'ny fampifangaroana lamba izy io.
Amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny ora fiasan'ny ekipa dia mamorona ny filana amin'ny fikolokoloana ny varavarankely sy ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny ora fenon'ny 24, mifanohitra amin'ny fe-potoam-pahazavan'ny jiro.
Ny jiron-jiro anankiroa dia mampifandray ny tombontsoa rehetra avy amin'ny jaky roa izay misy iray. Mifidiana eo amin'ny firafitry ny vatosoa anankiroa mba hamoronana jamba efa mahazatra izay hanome alokaloka tsy misy fetra sy miovaova ho an'ny mpandeha sy ny ekipa amin'ny fotoana rehetra, andro na alina.
Ahoana no fomba fiasan'ny jamba roa?
Ilay jamba roa sosona dia manana kasety nitaingina ny ambony sy ny ambany. Ao anaty cassette tsirairay dia misy roller izay afaka mametraka ny lamba. Ny lalamby ambany ambany dia azo sintomina ary hidina miaraka amin'ny lalamby ambany ambany mba hanambatra ireo jamba.
Izany dia ahafahanao mampiasa fitaovana karazana iray rehefa hidina ny jamba sy ny karazana fitaovana faharoa rehefa atsangana ny jamba. Ny jamba dia afaka atsahatra amin'ny toerana rehetra mba hahafahanao manana karazam-pitaovana isan-karazany amin'ny fotoana iray ihany.
Raha tianao ny miditra amin'ny varavarankely dia esory tsotra izao ny rindrina ambany ary ny iray na ny jaky dia azo alaina ao anaty kasety araka izay aseho eto ambany.
Ny laharana serivisy dia ahitana ireto manaraka ireto:
Manolotra fanompoam-pahaizana Fast Fast. Ny rafitra roa jamba dia marefo amin'ny fikolokoloana ho an'ny fanorenana haingana sy mora ataon'ny ekipan'ny sambo.